Semalt: Rinobudirira Bhizinesi Pamhepo
Semalt Chikwata: Nyanzvi paKushandira
Nhanganyaya yeDhijitari yekushambadzira Services
Bhizinesi rakabudirira naSemalt. Sei?
Iyo Pazasi Line
Yekuvandudza nyowani kubva kuinjini dzekutsvaga inobata varidzi vebhizinesi nekutya kusazivikanwa. Mubvunzo wakajairwa pese-pese - "Ungamira sei webhusaiti yangu papeji rekutanga raGoogle?"
Kuti uise webhusaiti pane peji rekutanga rejini yekutsvaga, iwe unofanirwa kutarisa pane zvakasiyana SEO zvinhu. Sezvo wese muridzi webhizimusi asingakwanise kugona hunyanzvi hweSEO, vazhinji veDhijitari Yekushambadzira Vimbiso anovimbisa kuvabatsira.
Izvo zvinonzwika zvakanaka, asi mashoma mashoma maarti anogona kuvimbika kana zvasvika pakuisa webhusaiti pane yekutanga peji yeyipi injini yekutsvaga. Mazuva ano, zita riri shure kwekubudirira kwemabhizinesi mazhinji epamhepo ndiSemalt. Enderera kuverenga kuti uzive zvakawanda nezvazvo.
Semalt yakavambwa muna 2013 sekambani yekutanga IT kambani. Musoro wayo mukuru uripo muKyiv, Ukraine.
Iyo inopa inoshanda kwazvo Internet Kushambadzira Services pamutengo unodhura. Semalt inotarisira masevhisi ayo kune varidzi vebhizinesi, nyanzvi dzekushambadzira, vanoongorora, uye webmasters pasi rese.
Kunyanya, Semalt anopa zvinotevera:
Yakakwirira-yepamusoro SEO Kusimudzira
Vhidhiyo Yekusimudzira Mabhizinesi
Kuti uwane kana iyo Dhijitari yekushambadzira yakashanda kana kwete, tsvaga izvo zvoga zvinobatsira izvo vatengi vazvo vanowana. Kunze kwekukwidza bhizinesi rako kune zvitsva zvitsva, heano mamwe mabhenefiti iwe aunowana kubva Semalt:
Nyanzvi dzine tarenda dziripo 24x7
Akashanda anopfuura mazana matatu ezviuru zvevatengi
Yakakwirira mhando masevhisi anopiwa pamutengo wakaderera
Flexible dhisiki system inokatyamadza vatengi
Dhijitari yekushambadzira maAgency inogona kuunza yakakura mibairo nguva imwe neimwe kana vaine timu yekugadzira, ine tarenda, inotungamira, uye inokurudzirwa pfungwa.
Semalt anodada nekuve nechikwata chizere nehunhu uhu. Neboka raSemalt , iwe unowana anopfuura zana nemakumi matatu epfungwa dzakanakisa kubva kuindasitiri pabasa rako.
Iyi nyanzvi dzinotanga kunzwisisa zvinodikanwa zvebhizinesi rako uye vobva vasanganisa tekinoroji nezvavakaona kuti vakupe zvigadzirwa zvakanaka.
Kuita kwavo kwakabatanidzwa kunowedzera kuvapo kwepamhepo kwebhizinesi rako. Vatengi vako vangango tarisa vanogona kuwana webhusaiti yako pane imwe nzvimbo yepamusoro muSERPs (Tsvaga Injini Yekutsvaga Mapeji).
Kuti unzwisise Semalt uye masevhisi ayo, zvakakosha kuti iwe uzive, zvishoma, iyo nheyo dzeDhijitari yekushambadzira.
SEO inomira Yekutsvaga Injini Yekutsikisa. Iyoyo maitiro ekugadzirisa zviri mukati mewebsite kuitira kuti iite yepamusoro mune organic kunyorwa kwekutsvaga injini.
Mune SEO, mune iwe, injini yekutsvaga, uye munhu ari kutsvaga chimwe chinhu. Iwe unogona kunge uri bhizinesi muridzi / wekushambadzira / muongorori / webmaster, uye yekutsvaga injini inowanzo Google.
Ngatiti iwe wakanyora blog blog ichitsanangura zvakanakira kutsanya kwemvura. Uye, iwe unoda injini dzekutsvaga kuti dziratidze iyo semhedzisiro yepamusoro kana chero munhu akatsvaga iyo kiyi yekukosha, mvura yekubatsira inobatsira.
Nezve izvo, iwe unofanirwa kukwirisa iyo blog post. Google ichairatidzira seimwe yemhedzisiro yepamusoro kana munhu akatsvaga iro keyword.
Kuti unzwisise zviri nani zveSEO, tarisa kune inofanirwa-yekumaka bookmark ye SEO yekutanga.
Iyoyo maitiro ekuunganidza, kuongorora, uye kuudza data rewebhu. Iyo inobatsira varidzi vebhizinesi kuti vanzwisise uye kuwedzera kushanda kwewebhu webhusaiti.
Kuburikidza neWebhusaiti Analytics, varidzi vebhizinesi vanodzidza nezveizvi maitiro uye zviitiko zvevashanyi pane yavo saiti:
Vangani vanhu vakashanyira nzvimbo iyi?
Kwaive kushanya kwavo kwekutanga here, kana kuti vari kudzoka vashanyi?
Vakagara nguva yakareba sei pane saiti?
Mapeji mangani avakawana?
Ndeapi mapeji iwo avakawana?
Vakasvika sei webhusaiti - kuburikidza nechisungo kana zvakananga?
Chii chinonzi SSL?
SSL inomiririra Yakagadzikana Masokisi Layer. Iyi yepamusoro yekuchengetedza tekinoroji iyo inobatanidza webhu browser uye webhu server kuburikidza neiyo yakachengetedzwa chibatanidza.
Kazhinji, iyo data inotamiswa pakati pemaseva ewebhu uye mabhurawuza iri muchimiro chemavara akajeka. Kana magedhi achibvisa iyo data inotumirwa pakati pewebhu server uye browser, ivo vanogona kuishandisa zvisizvo.
SSL inova nechokwadi chekuti chidimbu chimwe nechimwe che data chinotamiswa pakati pebrowser newebhu server chinogara chakavanzika. Kuti unzwisise zviri nani, enda kuburikidza neKutanga Yekutungamira kune SSL: Izvo Izvo & Nei Chichiita Yako Webhusaiti Yakachengeteka Zvakawanda.
Iyoyo maitiro ekuchengetedza masheji akakodzera kubva kune mamwe mawebhusayithi kune yako saiti.
Chinangwa cheChinzvimbo Kuvaka maitiro kutungamira akanyanya kunaka mhando kubhusaiti yako. Iyo inowedzera mukana wekuti webhusaiti yako inogona kukwira kumusoro paSERPs (Mhando yekutsvaga Mapeji Mapeji).
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve Link yekuvaka maitiro, unogona kuenda kuburikidza ino Wikipedia peji.
Iyo chigadzirwa portfolio yeSemalt ine akawanda Dhijitari Ekushambadzira Services. Vanobatsira bhizinesi varidzi vanowana pavanosarudza Semalt ndeyekuti yayo yakawanda masevhisi inoenderana nezvinodiwa nemabhizinesi.
Iwo makuru ndiwo:
Mahara SEO Kubvunza
AutoSEO yakasarudzika SEO chishandiso chakagadzirirwa varidzi bhizinesi / kushambadzira nyanzvi / vanoongorora / webmasters avo:
Unoda kuwedzera kuvapo kwavo pamhepo nekutengesa
Hazvina kujairana zvakanyanya neSEO nemaitiro ayo
Vanofarira kuona zvawanikwa usati waisa mari yavo mune chimwe chinhu
Nguva pfupi mushure mekunyoresa AutoSEO, iyo webhusaiti webhusaiti inotumira mushumo mupfupi kwauri. Iyo inopa zano kana webhusaiti yako iri kuwirirana neiyo indasitiri zviyero uye chii chimwe chaungaite kuti ugadzirise chinzvimbo chayo paminjini yekutsvaga.
Kubatsira kwakanyanya kwe AutoSEO nde:
Inogonesa Webhusaiti: Inoita chokwadi chekuti webhusaiti yako ine hushamwari kutsvaga injini uye inoteedzera kune zvakajairika SEO maitiro.
Inovandudza Webhusaiti Kuoneka: Iyo inosimudzira webhusaiti yako yakakosha mazwi uye inova nechokwadi chekuti inokwira pamusoro paGoogle kana munhu achitsvaga iwo mazwi akakosha.
Inokwezva Vashanyi Vatsva: Nekuvandudza kuoneka uye kukurudzira kwakakodzera, webhusaiti yako inokwezva vashanyi vakawanda. Uye, iwe unoziva kuti vazhinji vashanyi zvinoreva yakawanda purofiti.
Inowedzera Iko Kuvepo kweInternet: Iyo inowedzera kuvapo kweInternet yebhizinesi rako rakapetwa, nokudaro, ichivhura mikana yakawanda yekukura.
FullSEO inzira yepamberi uye inoshanda zvakanyanya yekuisa webhusaiti yepamusoro pane yekutsvaga peji reGoogle.In FullSEO, nyanzvi kuSemalt dzinotakura mhando dzakawanda dzekuziva nezvekunze kwekunze webhusaiti. Ivo vanove nechokwadi chekuti iwe unowana zvinopfuura izvo zvaunoda mhinduro munguva pfupi.
Zvakanakira zve FullSEO
Kubatsira kwakanyanya kweFullSEO nde:
Inogonesa Webhusaiti: Inoita chokwadi chekuti webhusaiti yako uye zvirimo zvinosangana ne SEO zviyero. Iyo inosimudzira kuvapo kwepamhepo kwebhizinesi rako, zvichiita kuti iwedzere mukurumbira.
Inovandudza Iyo Unhu hweMhando : FullSEO inobvisa yakadzika-mhando uye isiriyo zvisikwa kune yako saiti. Iyo inova nechokwadi chekuti traffic kune yako saiti inongouya chete kubva kumusoro-mhando nzira.
Inovandudza Musika Musika: FullSEO inobatsira mabhizinesi kukwidziridza nzvimbo yavo yemusika uye kufambira mberi kwevadzivisi vavo.
Kukurumidza uye Kuenderana Migumisiro Yenguva Yakareba: FullSEO inovimbisa kuti iwe unowana zvawanikwa kwete nekukurumidza, asiwo zvinowirirana kwenguva yakareba.
E-Commerce SEO naSemalt inzira yakavandudzwa yekubatsira iyo online bhizinesi kukura uye kubudirira.
MuE-Commerce SEO, iyo nyanzvi paSemalt inokupa iwe mhinduro yakasarudzika uye nyore kwebhizimusi rako. Inobatsira mukusimudzira bhizinesi rako kune tarisiro.
Zvakanakira E-Commerce SEO
Inotevera ndiyo yekutanga mabhenefiti eE-Commerce SEO:
Zvinokwezva Vatengi: E-Commerce SEO yekutanga inotsvaga mishanduko yemibvunzo inoenderana nebhizinesi rako. Ipapo hurongwa hwakakodzera hwekusimudzira hunoitwa kubatsira bhizinesi rako kukwezva vatengi vatsva.
Anounza Mhedzisiro: Sezvo mazhinji E-Commerce zvitoro asiri mombe dzemari, varidzi vadzo vanotarisira kuti mari yakawedzerwa mukukwidziridzwa inofanira kuunza migumo inodiwa. E-Commerce SEO inova nechokwadi chekudyara kwavo kunounza migumisiro inoshanda munguva pfupi.
Kugadziriswa kwePasi-frequency Keywords: E-Commerce SEO inova nechokwadi chekuti webhusaiti yako inokwira pamusoro kune yakaderera-frequency mazwi makuru zvakare. Imhaka yekuti vanhu vanotsvaga neakadzika-frequency makiyi vanowanzoita kutenga kana vasvika pane chaiyo online chitoro.
Niche Kuongorora: Iwo e-commerce uye SEO nyanzvi paSemalt vanoita zvemakwikwi kuongororwa kwebhizinesi rako niche. Ivo vanounganidza ruzivo uye vanochishandisa kumisikidza nzira inonyanya kushanda yekubudirira kwebhizinesi rako repamhepo.
Iyo yepamusoro analytics chishandiso chinokubatsira kuona zviri kuitika mumusika. Zvinoitawo kuti iwe uongorore chinzvimbo cheavo vakakwikwidza.
Iyo Webhusaiti Analytics chishandiso cheSemalt inokupa:
Keyword mazano ezvigadzirwa zvevatengesi akakodzera
Kutsvaga kwemazuva ese kwewebsite pane injini yekutsvaga
Ruzivo rwebhizimusi rako
Iyo nzvimbo yekutarisa uye kuona mamiriro emashoko ako akakosha
Iyo nzvimbo yekutsvaga nekudzidza iyo yekutsvaga injini renji yeavo vakakwikwidza
Kubatsira kwakanyanya kweWebhusaiti Analytics chishandiso nde:
Monitors Website Position: Ichi chishandiso chinobatsira mukutsvaga chinzvimbo chebhizinesi rako mumusika. Ruzivo rwarunopa runoita kuti uone zvakanaka uye zvisina kunaka zvinhu zvinokonzeresa nzvimbo yeyako saiti.
Inotarisa Position yeVakwikwidza : Ichi chishandiso kubva kuna Semalt chinofumisawo ruzivo rwevaikwikwidza. Unogona kushandisa ruzivo rwamunopa kuti ubatsirwe.
Inobatsira Mukutsvaga Matsva Matsva: Iyo data yainowana mushure mekutarisirwa kwebhizinesi rako inobatsira mukutsvaga mikana mitsva yekukura mumisika mitsva.
Inoshandura iyo Data muPresentable Mafomati: Unogona kuchengetedza iyo data rese rakapihwa neichi chishandiso mune yePDF neExcel mafaera.
Iyo saiti kutanga neHTTPS yakachengeteka, Google-inoshamwaridzika, uye inokwezva vashanyi vakawanda. Semalt inopa zvitupa zveSSL kuchengetedza webhusaiti uye ita kuti ive shoma panjodzi yekurwiswa.
Semalt inopa yemahara SEO kubvunza uko nyanzvi dzayo dzinoongorora SEO zvinetso zvesaiti yako uye zvinopa kukurudzira kukurudzira kuvepo kwayo online.
Saka, aya masevhisi kubva kuna Semalt anova nechokwadi chekuti bhizinesi rako repamhepo rinowana kubudirira kukuru munguva shoma.
Idzi nyaya ndidzo dzese nezve rwunobudirira nzendo dzevatengi. Vamwe vatengi vanoenda kunoshanda kamwe chete, vamwe vanosarudza kuwanda, uye vamwe vanoenda kunobvunzira SEO dzemahara vasati vaita yekupedzisira kufona.
AutoSEO Vatengi Ongororo
Kana zvasvika kune AutoSEO, anopfuura zviuru zvishanu mawebhusaiti akakura neSemalt. Kuti utarise wega, enda kune Semalt Nyaya Dzebudiriro Nhau peji . Pano, iwe unogona kusefa nzvimbo idzi maererano neindasitiri nematunhu.
Nhamba dzinotaura zvese, kana muchiitiko cheSemalt, vatengi vanozvitaura zvese. Iwe unogona kushanyira iyo Client Testimonials peji uye enda nemakumi matatu matatu evhidhiyo ufakazi uye 146 akanyorwa zvirevo. Ingo tsvaga kuti yakabatsira sei mazana evatengi mukuvandudza bhizinesi ravo repamhepo.
Vatengi SEO Nyaya
Iwe unoda kunzwa rwubudiriro rwendo rwevatengi veSemalt? Ingo tsvaga iyo Vatengi SEO Nyaya dzeji uye unosangana nevatengi vavo vanofara avo vakakura zvakanyanya neSemalt SEO masevhisi.
Semalt imwe yemamwe mashoma eDhijitari Ekushambadzira maAgency ayo anofukidza nyika dzinodarika gumi neshanu neshanu muSEO.
Kune vanopfuura 210 vatengesi veSemalt masevhisi.
Semalt vashandi vano ruzivo mumitauro yakawanda. Ivo vanoshandira vatengi zvisinei nekuti vanotaura mutauro wei.
Anopfuura makumi matatu emapurojekiti anokurudzirwa naSemalt ari muPamusoro-10 rondedzero yekutsvaga.
Semalt ane yakasarudzika kunyoresa mubvunzurudzi, Turbo-Iyo Turtle, iri zvakare chiratidzo cheSemalt. Izvo zvinoshanda, zvinogara muhofisi yavo nguva dzese.
Munyika ino yedhijitari, SEO ndiyo kiyi yekubudirira. Kana iwe ukabata ruzivo rwakakwana pamusoro peSEO uye uine nguva yekukanyisa saiti yako, zviite uri wega.
Nekudaro, iyo nzira yakanakisa ndeyekuhaya masevhisi eAn-yakazara stack Dhijitari yekushambadzira Agency, seSemalt, uye varegedze vabate zvese zvekushambadzira internet zvido zvebhizinesi rako.